လူသေပေမယ့် နာမည်မသေဘူးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ XXXTENTACION
On July 2, 2018 By Angel
ဒီရက်ပိုင်းမှာဘဲ သေနပ်ပစ်လုပ်ကြံမှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ Rapper အဆိုတော့ XXXTENTACION ကတော့ လူသေပေမယ့် နာမည်မသေဘူးဆိုတာကို သက်သေပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ Billboard Top 100 မှာ XXXTENTACION ရဲ့ သီချင်း စုစုပေါင်း ၉ပုဒ်တောင် နေရာယူထားကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ရက်ကမှ MTV ထွက်ခဲ့တဲ့ SAD ဆိုတဲ့သီချင်းဟာ Billboard Top 100 List ရဲ့ နံပါတ် ၁ နေရာကို ထိပ်ဆုံးမှာ ယူထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာဆိုရင် XXXTENTACION ရဲ့ Second Album ” ? ” လို့ပေးထားတဲ့ album ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။
SAD music video ကိုတော့ XXXTENTACION သေဆုံးပြီးခါမှ You tube မှာတင်လိုက်တာတာကြောင့် သီချင်းရဲ့ နာမည်၊ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေဟာ ပရိသတ်ကို ပိုပြီးနာကျင်စေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့ XXXTENTACION အတွက် မယုံနိုင်သေးတဲ့ အခုချိန်မှာ ဒီ music video ကြောင့် ပိုပြီးခံစားသွားစေခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် SAD ရဲ့ views ဟာ 46 Million တောင် ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါတောင် 3days ago ဘဲရှိပါသေးတယ်။
Billboard Top 100 မှာ နေရာယူနေတဲ့ XXXTENTACION ရဲ့ သီချင်းတွေကတော့ –
SAD! – 1
Moonlight – 16
Changes – 18
Jocelyn Flores – 19
F**k Love (Featuring Trippie Redd) – 28
Everybody Dies In Their Nightmares – 42
The Remedy For A Broke Heart (Why Am I So In Love) – 58
Hope – 80
Numb – 82
PREVIOUS POST Previous post: ဆံပင်ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့် ပရိသတ်တွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ Celine Dion
NEXT POST Next post: Billboard No.1 ရလို့ ပျော်နေတဲ့ Cardi B